Matongerwo eNyika – Page 2
Category: Matongerwo eNyika	Vanorima Mbatatisi Vokumbira Rubatsiro kuHurumende	July 20, 2017 Matongerwo eNyika, News in Shona 0	Varimi vakagariswa patsva vembatatisi vanoti havana rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende sezviri kuitwa kuvarimi vechibage nezvimwe zvirimwa. Originally posted on VOA Shona
Chibage Chodhura Kupinda Kutenga Kunze	July 20, 2017 Matongerwo eNyika 0	Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rehurumende rekurambidza kupinzwa kwechibage munyika uye kumanikidza varimi kutenga chibage muGrain Marketing Board (GMB) chete harina kunyatsofungisiswa nezvaro Originally posted on VOA Shona
Vanhukadzi Vokurudzirwa Kupinda Mubhizinesi reZvicherwa kuMusangano weMine Entra	July 19, 2017 Matongerwo eNyika, News in Shona 0	Izvi zvatsigirwa nemukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation, Amai Apolonia Munzverengwi, avo vati madzimai akawanda ave kuda kupindawo mumabhizimisi ezvezvicherwa asi vanoshaya mari inodiwa kuti vaite izvi. Originally posted on VOA Shona
Dandaro Bar raVaMudzuri Rinopiswa Kusara Ava Matsindo	July 19, 2017 Matongerwo eNyika 0	Mushandi mukuru wepabhawa iri uye ari hama yaVaMudzuri, VaVengesai Mudzuri, vati vanofungidzira kuti kupiswa kwaitwa bhawa iri kunze koda kuedza kunogona kunge kwaitwa nevanhu vezvematongerwo enyika. Originally posted on VOA Shona
ZEC Yoshanda neUnited Nations Kudzidzisa Vanhu Sarudzo dza2018	July 19, 2017 Matongerwo eNyika 0	Sangano reZimbabwe Electoral Commission richishanda nesangano reUnited Nations Development Program rinoti rave kutanga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Originally posted on VOA Shona
Matekisi Anoshanda Ari Pasi peUber muSouth Africa Okonzeresa Mutauro	July 19, 2017 Matongerwo eNyika 0	Mumwe wevanoshandira Uber, VaAlosi Ndlovu, vanoti kunetsana pakati pemapoka maviri aya kwave kukanganisa hupenyu hwemhuri dzakawanda dzanga dzichirarama nekutakura vanhu nedzimotokari dzavo. Originally posted on VOA Shona
Vaive Muchirongwa cheYALI Vobatsira Vamwe Vavo Vechidiki	July 18, 2017 Matongerwo eNyika, News in Shona 0	Mukuru weJumpStart Zimbabwe inoshanda iri pasi peYALI Creatives, VaTinotendaishe Gambahaya, vanoti vari kufamba vachibatsira vechidiki vane matarenda mumatunhu emunyika. Originally posted on VOA Shona
Hurumende Yoramba Ichizvicherera Gomba neKuramba Ichikwereta Mari	July 18, 2017 Matongerwo eNyika, Mitambo, News in Shona 0	Hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichienderera mberi nekukwereta mari yekushandisa munyika kana kuti domestic debt. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga reIMF nereWorld Bank akayambira kuti kuita izvi kuchapa kuti nyika itadze kubuda mumadhaka mairi. Originally posted on VOA Shona
ZEC Inoti Inoda Mari	July 18, 2017 Matongerwo eNyika 0	Komisheni inoonarinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission (ZEC) rinoti rinoda mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana emadhora yekushnda musarudzo dzakatarisirwa gore rinouya. Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusimudzirwa kwemadzimai, nekuenzaniswa kwemikana, sachigaro weZEC, Amai Rita Makarau, vati vane tarisiro yekuti hurumende ichavapa mari yesarudzo iyi kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nematambudziko emari. Amai Makarau vabvumawo kuti mari yavari kuda iyi inotyisa sezvo yakawanda Vachitaura nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi musarudzo dza2018 idzi, Amai Rita Makarau vati kunyange hazvo bumbiro remitemo richitaura zvekuenzaniswa kwemikana, pari zvino hapana mutemo unopa ZEC masimba kuti irambe mazita avanenge vapihwa nevemapato ezvematongerwo enyika kana pasina kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Sachigaro wekomiti iyi, Amai Biata Beatrice Nyamupinga vebato reZanu PF, vachimiririra Goromonzi West mudare reparamende, vatiwo senhengo dzeparamende havatarisiri kuti ZEC ingotarisa vanhukadzi vasingapiwi mikana yakaenzana nevanhurume. Amai Nyamupinga vakurudzirawo nhengo dzeZEC kuti dzidzidze kunyika dzakadai seRwanda kuti vanoenzanisa sei mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi panguva dzesarudzo Amai Makarau vaudzawo nhengo dzeparamende kuti sangano ravo harina simba rekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kwete. Amai Makarau vakurudzirazvizvarwa zveZimbabwe zvine zvitupa zvakanzi “Alien” kuti vaende kwaRegistrar Generai kunogadzirisa zvitupa zvavo. Amai Makarau vati pachatanga chirongwa chekunyoresa vavhoti havazobvumi kunyoresa vanhu vane zvitupa zvinoratidza kuti munhu haasi chizvarwa cheZimbabwe. Amai Makarau vati vanhu havasati vatanga kunyoresa kuti vazovhota musarudzo dza2018 asi vakatiwo gwaro revavhoti idzva rinenge ravapo muna Zvita. Originally posted on VOA Shona
Amai Mujuru Votsigirwa neDARE Kuti Vatungamire Mubatanidzwa weMapato Anopikisa	July 18, 2017 Matongerwo eNyika, News in Shona 0	Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, vabvuma kuti sarudzo dzemuna 2013 dzakabirirwa pachishindiswa kambani yeku Israel inonzi Nikuv. Originally posted on VOA Shona